トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi, okuyinto okuhloswe ngaso Xintai e pachinko eshintsha
Ngo wamakhaza pachinko, njll phambi esiteshini, ungakwazi futhi ukudlala kwalethela bakhululwe ngokushesha ngemva Xintai. Ngo, emihle nemibi kuhloswe Xintai ezifana, sizobheka ukuthi ingxenye. Okokuqala, it is a inzuzo, kwezinsuku ezimbalwa isingeniso Xintai, ukuthi iphakeme avame ukuba nail-Horukon kuhlanganise isethi amnandi eduze ekuqaleni. Yize
Xintai, siye yethulwa futhi esitolo engumakhelwane uhlobo olufanayo ngesikhathi esifanayo. Xintai Yiqiniso ngoba lapho imikhiqizo zonyaka ka leso, abantu abafuna ukushaya ngokuvamile. Nokho, iseduze to've bancishwa amakhasimende elinjalo, sinesibindi sonke Awunawo umuzwa ukwethula izinkinga ezinkulu. Khona-ke, ukudambisa kwezinsuku ezimbalwa kusukela osukwini lokuqala, ngangivame pachinko esitolo ukuze ijubane ukujikeleza kuyinto uhola.
njengoba ngaphandle, uma ungakwazi ukushaya kuphela esitolo endaweni phezulu isingeniso, kungaba khona izilungiselelo yokutakula ngoba shot futhi ugcine Abantu abawakhi.
Nokho, uma namanje njengoba lo mkhuba eziyisisekelo kulowo mdlalo Xintai, yethula izinsuku ezintathu ziningi oluhlose amehlo.
nemibi, kodwa Xintai iphuzu ukuthi kunzima ukuba abe itafula mahhala, ukuthi kungenzeka wasimama kamuva mayelana 3 izinsuku. Okokuqala Xintai, owethulwa ngosuku lokuqala futhi lottery, kusukela ngosuku lwesibili, futhi kukhona ngokuvamile ube ithebula egcwele kusukela ekuseni. Ngaphezu kwalokho, esimweni onobuhle ethandwa kangaka, njalo noma abanye abantu we sokulinda khulula, uma kukhona wenkokhelo, ke lokho ayezoba mancane amathuba okuba ube etafuleni khulula. Uma ngokuqinisekile
hit, wukuthi asikho kuphela ukuya kwelinye ekuseni.
futhi kuba ukulungiswa nail Horukon kulungiselelwa, Xintai ngokulandelana Barker, isikhundla wezinsuku ezintathu kusukela esethulweni ngosuku lokuqala, kodwa sivula ngaphandle nezinguquko ezivamile, kusukela ngosuku 4 isikhundla, ngakho wawuzongena imodi alulame , une eqinile kancane.
Lena Xintai izinzuzo nemibi-avareji yamaphesende sasemakhazeni pachinko, e abesabekayo pachinko emakhazeni, qinisa kusukela Xintai isingeniso ngosuku lokuqala, kukhona esitolo ukuthi ukuza iqoqo. Kulaba Xintai kuyinto emakhazeni pachinko enjalo, ethembekile Izinzuzo Ngicabanga kukhona okuncane.
Ukukhuluma ngenkani, imayelana yokuthi igalelo imodeli yakamuva. Esikhathini yokutakula kusuka osukwini olulodwa, izinzuzo Xintai uzonyamalala wonke. Uma inhloso
Xintai, hamba ukushaya isingeniso ngosuku lokuqala nge sokunconywa ke kwezinsuku ezimbili Uma ukulungiswa nail Horukon kulungiselelwa, ngicabanga ukuthi kuyoba ingase ibuke ngendlela kanzulu.
izindlela zakamuva, kodwa uyofuna hit nakakhulu uma onobuhle ezithandwayo, uma induku ukunqoba, Xintai Ngicabanga nzima ahoxise. Bheka Xintai mkhuba ngesikhathi ukwethulwa
hamba kahle pachinko eshintsha, noma izinzuzo izitolo eziningi e Xintai, noma zama hit kusukela Nquma uma bokwenza ngokuvamile ukuthenga kusuka.